Qarax is-miidaam oo agagaarka Garoonka Aadan Cadde lagula beegsaday kolonyo UNHCR – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 13 February 2014 4 April 2019
Mareeg.com- Qof watay gaari oo naftiis hure ah ayaa maanta isku qarxiyey kolonyo ay la socdeen saraakiil ak tirsan hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR xilli ay kasii baxayeen garoonka diyaaradaha Aadan cadde ee Muqdisho.
Qaraxaan maanta ka dhacay afaafka hore ee garoonka diyaaradha muqdihso oo loo adeegsaday gaari la soo buuxiyay walxaha qarxa ayaa inta la xaqiijiyay waxa ku geeriyooday shan ruux halka ay ku dhaawacmeen 8 qof oo kale, sida boolsika Soomaaliya sheegay.
Goobta uu qaraxu ka dhacay waxaa durbadiiba gaaray gaadiidka gurmadka deg degga, kuwaasi oo dadkii ku dhaawacmay goobta ka qaaday, islamarkaana geeyay xarumaha caafimaadka si ay u helaan gurmad caafimaad oo deg deg ah.
Halka uu qaraxu ka dhacay waxaa sidoo kale isku gadaamay ciidamo ka tirsan kuwa amniga ee dowladda, iyagoo halkaasi ka bilaabay howlo baaritaanno ah oo lagu ogaanayo dhagar qabayashii weerarkaasi ka dambeeyay.
Taliyaha hogaanka howlaha ciidanka booliska Soomaaliya Jeneraal Axmed Xasan Maalin oo warbaahinta kula hadlay gudaha garoonka diyaaradaha caalamiga ah Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in weerarkii maanta ay dad rayid ah waxyeelo ka soo gaartay, waxaana uu intaa ku daray inay ku bur bureen goobo ganacsi oo ku yiilay halka qaraxu uu ka dhacay.
“Falkaan waxaa ka dambeeyay dhagar qabashaasha Al-Shabaab oo ku laayay dad u badan rayid, ciidamada ammaanka xilligan waxa ay xaqiijinayaan amniga guud ee magaalada in uu yahay mid degan oo aysan cabsi ka jirin” ayuu Jeneraal Maalin hadalkiisa ku daray.
Baabuurta la bartilmaameedsaday ayaa waxaa saarnaa shaqaale ka tirsan Laanta Qaramada Midoobey ugu qeybsan Qaxootiga ee loo yaqaano UNHCR, kaasoo ka soo baxay Xerada UN-ka ku leeyihiin agagaarka Garoonka diyaaradaha.
Ilaalada dhaawacantay ayaa ahaa Soomaali, kuwaasoo saarnaa gaariga loo yaqaano Qooqan, kaasoo gadaal socday labo baabuur oo kuwa aan xabadaha karin ah, waxaana la sheegay in gaari yar uu watay ruux naftii hure ah uu ku dhiftay mid ka mid ah gaadiidka UN-ka ahaa.
Wararka ayaa sheegaya in gaariga gudihiisa aanu waxba gaarin, balse ay cagaha wax ka gaareen, iyadoo markii qaraxa dhacay kadib ay rasaas is qabsaday, waxaa la arkayay gawaarida gurmadka dega dega oo dhaawacyo u daabulayay goobaha caafimaadka.
Alshabaab ayaa sheegtay weerarka waxeyna xuseen iney ku dileen saraakiil ajnabi ah oo la socday gaadiidka ay weerarka la beegsadeen.